Dhawunirodha InShot Vhidhiyo yePC- Windows7, 8, 10 & Mac mahara
InShot Vhidhiyo Mharidzo yePC (Windows uye Mac) -Free Download
Inshot Vhidhiyo Mupepeti ndiyo yakanakisa foto uye vhidhiyo yekugadzirisa application iwe yausati wamboona kare. Zviuru zvemavhidhiyo ekugadzirisa ekushandisa anowanikwa muGoogle Play Chitoro asi InShot Vhidhiyo Mupepeti yakaita kurodha kwakakura munguva pfupi.
Iyo yakanyatsogadzirirwa kuisa mavhidhiyo pane yako Mapeji e Instagram. Inonyanya kushandisa-ushamwari uye iwe unogona nyore kugadzirisa mapikicha ako nemavhidhiyo.
Munyaya ino, Ndiri kukupa iwe nhanho nedanho gwara nezve “maitiro ekurodha mahara InShot App yeWindows uye Mac?”
Ndokumbira utarise chinyorwa nezve “maitiro ekurodha pasi nekuisa InShot App yeWindows ne Mac pasina mutengo?”
1 Dhawunirodha uye Kuisa- InShot Vhidhiyo Mharidzo yePC
1.1 Zvakanakira InShot yePC:
1.2 Zvakawanda kubva pasiti yangu
Dhawunirodha uye Kuisa- InShot Vhidhiyo Mharidzo yePC
For kupora kwemahara uye kuisirwa kweInb App, Unofanira kutevedzera nhanho idzi chete.
The InShot Vhidhiyo App inogona kuvhiyiwa neimwe yeiyo software inodzora kudzora kamera uye yayo vhidhiyo vhidhiyo. For chinangwa ichi, unongoda iye mukuru InShot App yePC.
Usati watanga kuisirwa maitiro e InShot App app ye windows, ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kuisa an Android Emulator, seBluestacks, Nox App Player, kana Xeplayer.
Unogona kutevedzera matanho akapusa aya Dhawunirodha InShot App yePC uye kuisa Anwendung pakombiyuta yako. Nomutsa tevera matanho uye isa Wyze App.
Pakutanga, dhawunirodha uye gadzira iyo admin emulator yakadaro Bluestacks muPC yako pawebhusaiti yavo https://www.bluestacks.com/.
Mushure mekurodha pasi emulator, you have to run the emulator app on windows. Dzvanya iyo icon ye yako Android emulator kuti umhanye.
ikozvino, tsvaga iyo Wyze app mune Play Store. Sarudza iyo InShot Vhidhiyo Edhiyo App uye tinya gadza.
Pfupiso ye InShot vhidhiyo mupepeti
Iyo InShot Vhidhiyo Edhiyo ndeye inoshamisa vhidhiyo yekugadzirisa application iyo inobatsira kurodha yako hutachiona mavhidhiyo pane iyo Instagram peji.
Dzimwe nguva haudi mavhidhiyo epakati uye wakasarudza kurodha mavhidhiyo akagadziridzwa nekuda kwemhando yepasi. Mavhidhiyo ako anoenda aine hutachiona kana zvemukati zvako zvichisekesa.
The InShot vhidhiyo mupepeti inovhara yakanyanya kunaka mabasa ekugadzirisa. Kana iwe urikugadzira MEMS uye gadzira zvinyorwa pane mavhidhiyo uchishandisa izvi InShot vhidhiyo mupepeti.
Zvakanakira InShot yePC:
Pano iwe unogona kuona zvakanakira InShot vhidhiyo mupepeti izvo zviripo yemutengo pachitoro cheGoogle.
Unogona kuisa mavhidhiyo ako pane yako Peji ye Instagram nehupamhi hwepamusoro.
Unogona cheka cheka uye wedzera mavara kumavhidhiyo ako.
Iwe unogona kugadzirisa kupenya kwemavhidhiyo uye nekumhanyisa kutonga.
Iwe unogona kugovera ako mavhidhiyo pasocial media.
wo, unogona kuseta mavhidhiyo ako nemhando dzakasiyana dzezvinowoneka.
Uchishandisa firita sarudzo unogona kuwedzera firimu Style kumavhidhiyo ako.
Unogona kuita mavhidhiyo anononoka uye shandura vhidhiyo mu Fomati yeMP4.
Gadzirisa zvirinyore zvirongwa zvako uye vhidhiyo kudzora sarudzo.
Aya ndiwo akanakisa maficha e InShot Vhidhiyo Mharidzo yePC. Unogona kudhawunirodha nekuisa InShot App yePC uye unakirwe nemaitiro ayo.
Thanks nekuverenga ichi chinyorwa, Ndinovimba unoifarira uye zvirokwazvo ichakubatsira dhawunirodha iyo InShot App yeWindows uye Mac.
Download Snapseed for PC Window 10, 8 uye 7
Yakazodzwa Pasi: Download Facetime Tagged Na: Dhawunirodha InShot App yePC, Yemahara kurodha inshot edhisheni app, Inshot app kurodha pasi uye kuisa, InShot App-download yePC, InShot yeWindows 7/8/10 & Mac, Inshot vhidhiyo mupepeti app online